Guddida Ilaalinta iyo Dabagalka Hantida Qarankee Golaha Wakiilada ayaa maànta Xafiiskiisa kulan kula yeeshay wasiirka horumarinta maaliyadda Dr. Sacad Cali Shire kulankaas oo ka dhacay xafiiska Wasiirka. - Xogside
Home WARARKA DALKA SOMALILAND Guddida Ilaalinta iyo Dabagalka Hantida Qarankee Golaha Wakiilada ayaa maànta Xafiiskiisa...
Guddida Ilaalinta iyo Dabagalka Hantida Qarankee Golaha Wakiilada ayaa maànta Xafiiskiisa kulan kula yeeshay wasiirka horumarinta maaliyadda Dr. Sacad Cali Shire kulankaas oo ka dhacay xafiiska Wasiirka.
Ujeeddada kulanka oo ahayd Gudbinta Miisaaniyadda xafiiska hanti dhawrka Guud ee Qaranka, maadaama oo Xeerka Hanti dhawrka guud ee Qaranku Xeer Lr. 76/2016 Qodobkiisa 56aad uu waajibinayo in Miisaaniyadda Xafiiska Hanti Dhawrku ay soo marto guddida PAC ee golaha Wakiillada.
Waxa ugu horeyn warbixin halkaas ka jeediyey wasiirka wasaarada horumarinta maaliyadda Dr. sacad Cali Shire, warbixintaas oo ka koobnayd, Qaab dhismeedka wasaarada, shaqaalaha wasaarada iyo nidaamka ay marto diyaarinta miisaaniyadda guud ee Qaranka.
Dhanka guddida waxa hadalka furay Xildhibaan Mustafe Axmed Cabdilahi oo ah guddoomiyaha guddida, isaga oo sharaxay ujeedada kulanka ay ugu tageen wasiirka, taas oo daarnayd meel marinta iyo ka wada hadalka miisaaniyada Xafiiska hanti dhawrka guud ee Qaranka.
Sidoo kale waxa hadalo ka jeediyey kulankan Xildhibaanada kale ee guddida, kuwaas dhammaantood iska dabamaray wadda shaqaynta golaha Wakiillada gaar ahaan guddida iyo sidii loo sii xoojin lahaa wadda shaqaynta, isla xisaabtanka iyo Daah-furnaanta dhammaan hay’addaha dawladda.
Guddiduna gacan ka gaysato dagabalka iyo Ilaalinta hantida Qaranka.
Dhanka kale waxa la isla qaatay wadda ilaalinta Sharciga, iyadda oo dhinac kasta sharciyada iyo Dastuurka dalka raacayso.
Previous articleWasiir kuxigeenka wasaaradda Xanaananadda Xoolaha iyo Horumarinta Kalluumaysiga ayaa saaka Xafiiskeeda ku qaabishay Wafti ka socda Xafiiska Taiwan ee Somaliland
Next articleMaxaa maska ka ilaaliya suntiisa?